फ्रान्सबाट ‘वनको वैभव’ नेपालमा :: महेन्द्र पौडेल :: Setopati
मान्छेका चालचलनका विषयमा अनेकौँ किताब लेखिए। तर वन्यजन्तुका विषयका कमै मात्र किताब लेखिए होलान्। जति लेखिए सायद ती पनि थोरै नै छन्, झनै नेपाली भाषामा त नगण्य मात्रमा नै होलान्। जीवजन्तुका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्दै पंक्षीप्रेमी लेखक ददि सापकोटाले ‘वनको वैभव’ जनावरका मनदेखि यौनसम्म नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्।
विगत दुई वर्षदेखि यसै विषयलाई सोधखोज अनुसन्धान गरेर कोरोना महामारीको समयलाई उचित प्रयोग गर्दै युरोपको फ्रान्स निवासी सापकोटाले महामारीकै समयमै यो हप्ता सुटुक्क बजारमा ल्याएका हुन्। फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको यस गैरआख्यान पुस्तकमा भित्री पृष्ठ र बाहिरी कभरलाई नीलम भुर्तेलले उत्कृष्टरुपले सजाएका छन्।
सन्दर्भ सूचिबाहेक एकसय उन्नाइस पेज रहेको यस पुस्तकमा ४८ शिर्षक छन्। प्रत्येक शिर्षकभित्रका जानकारीहरु छोटाछोटा सरल र रोचक भएकाले पढ्दा उत्सुकता जाग्छ।
शिर्षकभित्र बोतलमा सेक्स गर्न खोज्दा ठहरै हुने जीवजन्तुदेखि हात्तीले कसरी नेतृत्व लिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आफ्ना सन्तान जोगाउन र बलात्कार रोक्न बघिनीको चर्तिकला कम रोचक छैन। लेखक चितवन निवासी भएकाले सौराहमा सानैदेखि हात्ती बाघ र गैँडा देखेका हुनाले लेखकका धेरैजसो अध्ययन यी नै जीवजन्तुमा केन्द्रीत देखिन्छ।
हात्तीले खुटृाले सुन्नेदेखि लिएर कन्चटमा वैँश आउनेसम्मका कुरा लेखेका छन्। लेखकले गैँडाको बारेमा पनि रोचक कुरा जानकारीमा ल्याएका छन्। गैँडाले ‘घण्टाभर सेक्स गर्दै ५६ पटक वीर्यपतन’ गर्नेसम्मको उल्लेख छ। छेपारो र केही सर्पहरुमा दुइटा लिंगसमेत हुने रहेछ।
पाका उमेरका बुढाहरुको कुरा बाँदरले समेत सुन्दछ भनेर यस किताबमा उल्लेख गरिएको छ। यस किताब पढेपछि अष्ट्रेलियामा पाइने गोब्रेकिरा बोत्तलमा सेक्स गर्न खोज्दो रहेछ र सेक्स गर्दागर्दै ठहरै हुने रहेछ। भ्यागुताले आफ्नो युवती फकाउन लामो लामो भाकामा गीत गाउने रहेछ। भूकम्प हुनुअघि जीवजन्तुले कसरी मानवलाई जानकारी दिन्छनदेखि चराहरु प्लेनमा किन ठोकिन्छनसम्म यसमा उल्लेख छ।
साथै जीवजन्तुले कसरी बलात्कार गर्दछन्? उनीहरु समलिंगी हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने कुराहरु यसमा समेटिएको छ। पुस्तकभित्र बलात्कार रोक्नुमा जीवजन्तुहरुले कस्ता उपायहरु अपनाउने गर्दछन्, बलात्कार भएपछि कारबाही हुन्छ कि हुन्न? साथै उनीहरुले कुन तरिकाले भूकम्प आउन लागेको पत्ता लगाउँछन्?
त्यसो त सापकोटाको कर्मथलो फ्रान्स हो। प्रत्येक घण्टाको युरोमा रुपान्तर गरेर पैसा कमाउने ठाउँ मानिएको युरोपका कुनैपनि ठाउँ नेपालीले समयको सदुपयोग गरेकै हुन्छन् काम गरेर। तर ददि यस्ता मानिस हुन जसले विगत दशकदेखि केही न केही लेखिरहे। फ्रान्समा बसेर ब्लग चलाउँदै आइरहे। यसअघि सापकोटाका ‘पन्छी जगत’, ‘त्यो नेपाल’ र ‘दुखेको युरोप’ सार्वजनिक भइसकेका छन्।
सापकोटाकै सन् २००४ मा पहिलो ‘पंक्षीजगत’ नामक चरासम्बन्धी पहिलो पुस्तक प्रकाशित भएका थियो। वर्ड एजुकेसन सोसाइटीले चरासम्बन्धी निकालेको सो पुस्तकमा चराको बनोट, आकृति र चरा हेर्न जाँदा ध्यान दिने कुराहरु समेटिएका थिए।
सो कितावमा हिमाल पहाड र तराईमा पाइने चराहरुको विस्तृत वर्णन गरिएको थियो। करिब दुईसय ८० पृष्ठको सो किताबलाई चरासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा समेत राखिएको छ।
उनको अर्को कृति ‘दुःखेको युरोप’ २०७२ सालमा लेखेको यस किताबलाई हिमालयले प्रकाशनमा ल्याएको थियो। युरोपमा नेपालीहरु कसरी आए? कुन बाटोबाट आए? कति दुःख पाए? यी यावत पीडाहरु समेटेर उनले किताब तयार पारेका हुन्। एउटा किताब लेख्न यिनले आधा दशक समय गुजारेका छन्। वल्लो छेऊ र पल्लो छेउ चहारेका छन्। रेल, बस र प्लेनको यात्रामा दौडेका छन्, केबल अक्षरका लागि। अरुहरुका पीडा र व्यथालाई कितावमा समेट्न उनको मेहनत लगाव र प्रेम समाज र देशको लागि उच्च छ
लेख्न अति मनपराउने सापकोटाले यस वनको वैभव कितावलाई बडो मेहनत गरेका छन्। आफ्नो मनमौजी फुलबुट्टे भरेर किताव निकाल्ने सोच र शैलीलाई उनले दनक दिएका छन् किनभने प्रत्येक शिर्षकभित्रको गुदीलाई उनले सन्दर्भसूचि समेत राखिदिएपछि पाठकलाई भ्रम पदैन। पाठकले अनावश्यक र झन्झट अनुभव गर्न पाउँदैनन्, यस किताब पढ्दा।
रोचक र स्तरीय भएको हुनाले यसपछि के हुन्छ भनेर जिज्ञासु बनाउँछ। जीवजन्तुका विषयमा रुचि राख्नेलाई मात्र नभएर सबै उमेरका सबै क्षेत्रका मानिसलाई समेत रुचिकर लाग्ने यस किताव पुस्तकपसलहरुमा सजिलै पाइन्छ। सन्दर्भसूचिलाई मात्रै ६ पान्नामा समेटेका सापकोटाको कृतिको मूल्य भने नलेखिएको यस किताब पुस्तक पसलहरुमा दुई सय पचास रुपैयाँमा पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २८, २०७७, ०८:०२:००